KNU ကွဲတော့ ဘာဖြစ်လဲ | ဧရာဝတီ
KNU ကွဲတော့ ဘာဖြစ်လဲ
ရဲနည်| October 10, 2012 | Hits:8,675
| | KNU အကွဲအပြဲ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို ထိခိုက်မလား (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး KNU ဗဟိုက ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် KNLA စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မူတူးစေးဖိုး၊ ဗဟိုတရားရေးဌာနက ပဒိုဒေးဗစ်ထောနဲ့ လူမှုဝန်ထမ်းနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးဌာန တာဝန်ခံ ပဒိုရောဂျာခင်တို့ကို တာဝန်မှ ရပ်စဲလိုက်တာဟာ အကွဲအပြဲ မကြာခဏ ဖြစ်တတ်တဲ့ KNU အဖွဲ့တွင်း နောက်ထပ် ပဋိပက္ခတခု ဖြစ်ပေမယ့် နေပြည်တော်အစိုးရနဲ့ KNU အကြား ခရီးရောက်စပြုနေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်း အပေါ် ရိုက်ခတ်သက်ရောက်မှု ရှိရုံသာမက KNU နောက်ဆုံး နာမည်ပျက်ပြီး နိုင်ငံရေးအကျိုးစီးပွား ရုပ်လျော့ဖို့ပဲ ဖြစ်လာနေစေပါတယ်။
တာဝန်က ထုတ်ပယ်ခံထိတဲ့ KNU ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းနဲ့ ရင်းနှီးကြတယ်ဆိုပေမယ့် အစိုးရက သွေးခွဲတာဆိုတဲ့ ရှေးရိုးစွဲ ကောက်ချက်ကိုတော့ ဒီတခါ အလွယ်တကူ ပယ်ချရပါမယ်။ အကြောင်းက ဒီလိုလုပ်လို့ KNU ကွဲပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး ပျက်ရင် နေပြည်တော်ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှု အဖွဲ့ နာမည်ပျက်ရမှာမို့ပါ။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ဦးအောင်မင်း၊ ဦးခင်ရီတို့က ဆွေးနွေးပွဲတခု ရန်ကုန်မှာ အရေးပေါ် ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ၀န်ကြီးဦးအောင်မင်းက ကရင်တိုင်းရင်းသားများ စည်းလုံးစေချင်ပြီး အစိုးရမှာ တိုင်းရင်းသားတွေကို သွေးခွဲတဲ့မူဝါဒ မရှိ၊ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ ဆက်လုပ်မယ် လို့ ပြောပါတယ်။ KNU က ဖိတ်ခေါ်ရင် ဦးအောင်မင်းနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ လာရောက် တွေ့ဆုံဖို့ အသင့်ရှိနေတယ်လို့လည်း ထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။
အခုအတိုင်းဆို KNU က ဦးအောင်မင်းတို့နဲ့ ပြန်စကားမပြောခင် အချင်းချင်း ပြန်စကားပြောပြီး အဖွဲ့ရဲ့ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်မှုကို ဘယ်လိုပြန်တည်ဆောက်ပြီး ဘယ်ပုံ ရှေ့စခန်းသွားမယ် ဆိုတာ အရင်ဆွေးနွေးရပါမယ်။ ဖြစ်စဉ်ကို ပြန်ကြည့်ရင် ဥက္ကဌ တာမလာဘော၊ ဒု ဥက္ကဌ ဒေးဗစ်တာကပေါ၊ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဇီဖိုးရာစိန်တို့ ဦးစီးတဲ့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်တွေက စစ်ဦးစီးချုပ် မူတူးစေးဖိုး၊ ဒေးဗစ်ထောနဲ့ ရောဂျာခင်တို့ကို အဖွဲ့ရဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း စည်းကမ်းတွေကို မလိုက်နာဘူး လို့ စွပ်စွဲ၊ တာဝန်က ရပ်ဆိုင်းပြီး တပ်ဖွဲ့ဝင် အများဆုံးရှိတဲ့ KNLA တပ်မဟာ ၅ တပ်မဟာမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ဘောကျော်ဟဲနဲ့ စစ်ဦးစီးချုပ် အစားထိုးခန့်ထားဖို့ ပြင်တယ်လို့ ကရင်သတင်းရပ်ကွက်တွေက ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် KNU ဖွဲ့စည်းပုံအရ တပ်မဟာ ၇ ခုရှိရာ တပ်မဟာ ၂ နဲ့ ၅ က ဗဟိုနဲ့ ဘောကျော်ဟဲကို လက်ခံပြီး ကျန် ၁၊ ၃၊ ၄၊ ၆၊ ၇ က မူတူးစေးဖောကို ဆက်ထောက်ခံတာမို့ တပ် နှစ်ခြမ်းကွဲမယ့် အခြေအနေပါ။ ဒါ့အပြင် ဒီအကွဲအပြဲကြောင့် ဇန်နဝါရီထဲမှာ လက်မှတ်ထိုးထားခဲ့တဲ့ အပစ်ရပ်ရေး သဘောတူညီချက် ပျက်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် နောက်ပြန်လှည့်သွားမလား။ တပ်မဟာအချင်းချင်းကြား အပစ်အခတ်တွေ ရှိလာမလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေဖြစ်လာပါတယ်။
သမိုင်းမှာ အကွဲအပြဲတွေ၊ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုတွေ ရှိတာ ၁၉၉၄ ခု DKBA ခွဲထွက်မှု၊ ၂၀၀၈ ခု ထိုင်းနယ်စပ်မြို့ မဲဆောက်မှာ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး မန်းရှာလာဖန်းကို လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုတွေက အထင်အရှားရှိခဲ့တာမို့ ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတွေ ရှောင်နိုင်ဖို့ ကရင်တပ်တွေကြားမှာ ဩဇာကြီးသူ တပ်မဟာ ၇ မှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ဂျော်နီက တပ်တွေကြား စိတ်အေးအေးထားပြီး သွေးထွက်သံယို မဖြစ်ဖို့ နှိုးဆော်ပြီး ကရင် အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း စည်းလုံးညီညွတ်ရေး တောင်းဆိုနေပါတယ်။
ခေါင်းဆောင်မှုအတွင်း သဘောထားကွဲတာ ဇန်နဝါရီလအတွင်း ဒေးဗစ်ထောဦးစီးတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ အပစ်ရပ်ရေး သဘောတူလက်မှတ် ဘားအံမှာ ရေးထိုးကတည်းကပါ။ ဒေးဗစ်ထောဦးစီးတဲ့ လက်မှတ်ရေးထိုးမှုဟာ အရေးမပါဘူးလို့ ဇီဖိုးရာစိန်က ကန့်ကွက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဇီဖိုးရာစိန်ဦးစီးပြီး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်နဲ့ ဘားအံတွေကို သွားခဲ့ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးခဲ့တာတွေကြောင့် အခုလို ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ ဆက်အကောင်အထည် ဖော်နေသူတွေကို တာဝန်က ရပ်ဆိုင်းပစ်တာ နားမလည်နိုင်ဖြစ်ကြရပါတယ်။ KNU ဗဟိုနှင့် စစ်ဦးစီးချုပ်တို့အကြား ပြီးခဲ့သည့်လဆန်းပိုင်းက စပြီး တဘက်နဲ့တဘက် အပြန်အလှန် လေးစားမှု မရှိတော့ဘဲ ကြေးနန်းနဲ့ပဲ နှစ်ဘက်သဘောထားတွေကို ပေးပို့နေခဲ့တယ်လို့ ကရင်သတင်းရပ်ကွက်တွေက ဆိုပါတယ်။
“ကရင့်တော်လှန်ရေး”ကို စောင့်ကြည့် ဝေဖန်သူတွေကတော့ DKBA နောက်ပိုင်း ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ၊ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ အစရှိတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေ အသီးသီးမှာ နာမည်အမျိုးမျိုးနဲ့ ခွဲထွက်ပြီး ဗဟိုအစိုးရနဲ့ အပေးအယူလုပ်တတ်တဲ့ နိုင်ငံရေးအလေ့အထ ရှိတာကြောင့် အခုလည်း KNU ထပ်ကွဲနိုင်တယ်လို့ သုံးသပ်နေကြပါတယ်။
ဒီလိုသာ ထပ်ကွဲပြီဆိုရင် စောဘဦးကြီးကစ မန်းဘဇံ၊ စောဘိုမြ၊ စောသန်းအောင်၊ မန်းရှာလာဖန်းတို့ အလယ် ဦးစီးတည်ထောင်လာခဲ့တဲ့ ဖယ်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေး တိုက်ပွဲဝင်လာခဲ့တဲ့ ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကြီးရဲ့ နိုင်ငံရေးဩဇာနဲ့ ပုံရိပ်ဟာ ကရင်တိုင်းရင်းသားများမှာသာမက ပြည်ထောင်စုကြီးအတွင်းက အခြားတိုင်းရင်းသားများကြားမှာလည်း တစတစ ပျောက်ကွယ်ဖို့သာ ဖြစ်လာစေမှာပါ။ အစိတ်စိတ် အမွှာမွှာကွဲနေတဲ့ ကရင်ပြည်နယ်ဟာ အနာဂတ် ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအတွက် ဘယ်လိုမှ စံပြပုံစံမဟုတ်မှာက သေချာပါကြောင်း။
သား ယောင်္ကျားလေးများ ထိန်းကျောင်းခြင်းဦးသိန်းစိန် အိမ်ဖြူတော်ကို ခြေချခြင်း နောက်ကွယ်ကန်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံအရေး ဘာတွေ အလေးပေးမလဲနိုင်ငံရေးအရ သဘောတူညီချက်တရပ် လိုအပ်ခြင်းသုံးတတ်လျှင်ဆေး မသုံးတတ်လျှင်ဘေး နောက်ဆုံးရ ရုပ်/သံများ
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> Maung Kyaw October 10, 2012 - 2:31 pm	၁ နဲ့ ၃ က ဘောကျော်ကိုမထောက်ခံဘူးလို့ ..ဘယ်သူကဘာကြောင့်ပြောနိုင်ရတာလဲ။၆၊ ၄၊ ၇ ကဓါတ်ပျက်နေတာကြာလှပြီ။
Reply	Johnny Lynn October 10, 2012 - 6:57 pm	အရေးပေါ်ညီလာခံတစ်ခုကိုခေါ်ယူပြီး အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းသင့်ပါကြောင်းပါခင်ဗျာ Reply	saw soe October 10, 2012 - 11:37 pm	I wounder who is ye ni. I got the smell of SPDC.
Reply	Ohnmar Kyaw October 12, 2012 - 3:40 pm	ကျုပ်တို့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့နတ်ဆိုးက တိုင်းသူပြည်သားတွေကောင်းစားတာမလို့ချင်တော့သူလုပ်တဲ့နည်းတစ်
ကိုဘဲအလုပ်ရှုပ်နေကြတာပေါ့။ဒါမှငရဲပြည်မှာမြန်မာလူမျိုးများများရှိမှနတ်ဆိုးကပျော်မှာလေ။အော်ဒုက္ခဒုက္ခ.. Reply	Zau Hkun October 16, 2012 - 7:30 am	သုံးနေကြရှေးရိုးစွဲတိုင်းရင်းသားအခြင်းခြင်းသွေးခွဲနည်းလမ်းစဉ်အတိုင်းဘာဘဲ အဲဒီလမ်းစဉ်မသုံးဘဲသူတို့ရဲ့နည်းဗျူပာာဘယ်လိုမှမအောင်မြင်နိင်ဘူး တိုင်းရင်းသားတွေသိသိကြီးနဲ့ခံနေမှာလား
Reply	Etler October 21, 2012 - 1:22 pm	For all Karen people, “it doesn’t matter who you are but whose you are”
Reply	sunny October 24, 2012 - 4:48 pm	KNU ကွဲတော့ကောင်းတာပေါ့…တိုင်းပြည်အတွက်တစ်ရန်အေးသွားတာပေါ့…ဒီကောင်တွေ
Reply	တခြားဖတ်စရာများ သား ယောင်္ကျားလေးများ ထိန်းကျောင်းခြင်း